खनाल–नेपाल पक्षको रणनीति ः अन्तिम उपाय सामूहिक राजीनामा ? – Nepalpostkhabar
खनाल–नेपाल पक्षको रणनीति ः अन्तिम उपाय सामूहिक राजीनामा ?
नेपालपाष्ट खबर । २३ बैशाख २०७८, बिहीबार १५:४७ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिकरुपमा दलहरूसँग विश्वासको मत माग्नेदेखि आन्तरिकरुपमा विश्वासको मत नपाए के गर्ने भन्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । उता ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको खनाल नेपाल समूह ओलीलाई विश्वासको मत दिनेरनदिने अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यद्यपि सो समूहले पनि आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएको छ ।
बुधबारमात्र माधव पक्षका युवा नेता भट्टराई र अर्का गणेश पहाडीसँग ओली पक्षका नेता तथा एमाले महासचिव समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यसबारेमा छलफल गरेका छन्
उक्त छलफलमा पोखरेलले पार्टी विभाजन रोक्ने अन्तिम उपाय के हुनसक्छ रु भनेर सोधेका थिए । जवाफमा भट्टराईले फागुन २३ पछि ओलीले गरेका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बटमलाइन नै अन्तिम भएको जवाफ दिएका थिए । भट्टराईको भनाइप्रति पोखरेल कुनै जवाफ नदिई पछि कुरा गरौँला भन्दै बूढानीलकण्ठ जानुपर्ने भयो भन्दै हिँडेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई फकाएर विश्वासको मत लिने ओलीको चाहना पनि पूरा हुने सम्भावना देखिइसकेको छैन । किनभने, जसपाभित्रै ओलीको विपक्षमा उभिनुपर्ने धार क्रियाशील छ, जसको नेतृत्व डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले गरेका छन् । ओलीको पक्षमा रहेका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच पनि फाटो आइसकेको छ । यसले गर्दा हस्ताक्षर अभियान नै रोकिन पुगेको समाचार आइरहेको छ ।